एकअर्काको खालि ठाउँ भर्नुहोस् । | Nepali Christians
एकअर्काको खालि ठाउँ भर्नुहोस् ।
August 7, 2016 9:00 am by: Admin Category: Articles A+ / A-
जीवन सुन्दर छ, तर सजिलो छैन । जीवन सबै प्रकृति र सास हुने प्राणीहरूभन्दा उत्कृष्ट छ, तर शुद्ध छैन । जीवन सधै समस्याहरू पन्छ्याउदै, अवरोधहरूलाई पार गर्नतिर जुटिरहेको छ । क्षणिक खुसी पाउन । एकैछिन ओठ्मा टासेर उडी दिने छोटोमिठो याथात्र चाख्न । यहिँ जीवनको यात्रालाई सार्थक बनाउन मानिसले अनेक दु:खकष्ट झेल्छन् । अतिनै ठूलाठूला जोखिमहरू उठाउँछन् ।
आफ्नो जीवनको अन्तिम प्रस्तुति दिएर जानेहरू होस् या, अहिले अभिनय गर्नेहरू होस् सबैले उत्कृष्ट जीवन जिउने अभिलाषा साचेकै हुन् । तर विडम्बना थुप्रै मानिसहरूले आफूले पाएको सुन्दर मौकाहरूलाई ग्रहण गरेर पनि उत्कृष्ट जीवनको तुलनामा उपभोग गर्न सकेका छैनन् । किनकि तिनीहरू सिधैं गन्तव्यमा पुगेर रमाउन चाहान्छन् र बीच बाटोमा पाएका खुसीहरूप्रति चासो राख्दैनन् ।
कुनै ठाउँमा पुगिसकेपछि मात्र खुसी र सन्तुष्टि हुनुपर्छ भन्ने विश्वासमा जिउनु गलत रहेछ । धेरै मानिसहरूले यो सोच्छन्, म कुनै सफलतामा पुगिसकेपछि, अर्थात लामो समय प्रतिक्षा गरिएको यात्रामा पुगेपछि, म रमाउनेछु । यो सोच गलत रहेछ । किनकि सबैभन्दा खुसीको क्षणहरू बाटोमै आउछन्, यात्राको अन्त्यमा होइन ।
उदाहरणका निम्ति, “मेरो जीवनको बाटोमा मैले ख्रीष्ट येशूलाई पाएँ । ख्रीष्टलाई जीवनमा पाउनु भनेको मेरो बाटोमा नै मैले खुसी पाएको हुँ । ख्रीष्टको रगतमा बचाइएको मेरो जीवनको अन्तिम गन्तव्य त सुरक्षित छदै छ, तर यो यात्रामा म अहिले नै रमाउनुपर्छ भन्ने कुरा म बुझ्दछु ।” यसको अर्थ यहिँ हो कि आज नै तपाईंको जीवनमा भएको असल कुराहरू निकाल्नुहोस्, भोलि होइन । परमेश्वरको वरिपरी तपाईंको जीवन निर्माण गर्नुहोस् ।
हाम्रो जीवनले भोग्ने कुराहरूको निम्ति सहनशक्ति विकास गरिराखौं । किनकि हरेक मानिसको जीवनमा कठिन समयहरू आउँछन् । हरेक मानिसले चाखेर जाने कष्टहरूले हामीलाई पनि बाँधेको छ । सबै सम्बन्ध र जीवन यात्रामा उतारचढावहरू आउने नै छन्, यसकारण जीवनको यात्रामा भेटिने सबै खुसीहरूमा रमाउनुहोस् गन्तव्यमा मात्र होइन । अनि बाटोमा भेटिने ती दु:ख र कष्टहरूको निम्ति पनि तयार हुनुहोस् ।
हिजोअजा थुप्रै ठाउँहरूमा पुग्दा ख्रीष्टलाई पाएका जवानहरू हरेस खाएर मुर्छा परेको देख्छु । रोगहरूले ग्रसित इसाईहरू चंगाईको नाउँमा परमेश्वरको वलिदानलाई लतारेर अन्यत्र बाटो खोजिहिडेको देख्छु । के यो नै सम्पूर्ण जीवन होर ? उनीहरूले भौतिक जीवनको असफलता र कमजोर पक्ष्यहरूलाई लिएर रमाउन छोडेका छन् । वास्तवमा तपाईंको जीवन यहाँ रोकिन र निराशामा बाँच्नको लागि होइन तर आशिषको कारण बन्न चल्नुपर्छ । रोगमा होस् या अभावमा, त्यो स्वर्गीय आनन्दको स्पर्शलाई जीवनमा अनुभव गरेर उठ्नुहोस् । रमाउनुहोस्, आज नै रमाउनुहोस् ।
जीवनको बाटोमा रमाउन सक्ने तरिका भनेको एकअर्काको खालि ठाउँ भर्नु हो । मेरो जीवनमा समस्या छ, तपाईंको जीवनमा पनि छ । मैले धेरै कुराहरूको असन्तुष्टि र खाँचो महसुस् गरेको छु, तपाईंले पनि गर्नुभएको छ । आफैले बुझ्न नसकेको कतिपय अवस्थाहरूबाट म भागिरहेको छु, सायद तपाईं पनि । यसको मतलब यहिँ हो मेरो जीवनमा खालि ठाउँ छ । तपाईंको जीवनमा पनि खालि ठाउँ छ । तर दुवैलाई मिलाएर हेर्ने हो भने हामीमा कुनै खाली ठाउँ छैन । यसको निम्ति हामीले ख्रीष्टहृदयमा भएर एकअर्काको खालि ठाउँ भरेर रमाउन सिक्नुपर्छ । यो यात्रामा आज नै रमाउन सिक्नुहोस् ।
अरूहरूलाई प्रेरणा दिनुहोस् । आफूले अरूबाट चाहेको जस्तो सम्बन्ध अरूसँग बनाउनुहोस् । सफलता र असल सम्बन्धहरू बनाइराख्नप्रति सन्तुलन गर्ने परमेश्वरमा सधै धन्यवादी हुनसके हामीले यो जीवनको यात्रामा थुप्रै खुसीहरूको उत्सव मनाउन सक्नेछौं ।
फेसबुक पेज : www.facebook.com/shrawanbomjan
एकअर्काको खालि ठाउँ भर्नुहोस् । Reviewed by Admin on Aug 07 . जीवन सुन्दर छ, तर सजिलो छैन । जीवन सबै प्रकृति र सास हुने प्राणीहरूभन्दा उत्कृष्ट छ, तर शुद्ध छैन । जीवन सधै समस्याहरू पन्छ्याउदै, अवरोधहरूलाई पार गर्नतिर जुटिर जीवन सुन्दर छ, तर सजिलो छैन । जीवन सबै प्रकृति र सास हुने प्राणीहरूभन्दा उत्कृष्ट छ, तर शुद्ध छैन । जीवन सधै समस्याहरू पन्छ्याउदै, अवरोधहरूलाई पार गर्नतिर जुटिर Rating: 0
लिभिंङ बप्तिस युवा संगतिको बिसौ बर्...अब नेपाली बाइबल एन्ड्रोइडमा...